Ọtụtụ ụmụ nwoke na-etinye igwe ịsa ahụ, teknụzụ ọ na-enyere aka? | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ ụmụ nwoke na-etinye igwe ịsa ahụ, teknụzụ ọ na-enyere aka kesaa ọrụ?
Ignacio Sala | | Ngwa
Na omenala, mgbe ị na-ekesa ọrụ ụlọ, ihe karịa ka ọ na-adịkarị na afọ ndị na-adịbeghị anya, dịka iwu n'ozuzu, Ngalaba igwe na-asa ahụ na-adakwasị nwanyị mgbe niile, na-ezo aka na nwoke ahụ mgbe niile, enweghị amaghị ama banyere ọrụ ya. Enweghi ihe omuma a bu ihe metutara udiri akwa nke uwe, olee onodu uwe kwesiri ma obu saa ya, udiri uwe nwere ike hapu agba ... otutu okwu ndi nwoke leghaara anya mgbe obula n’enweghi nchegbu mgbe ayi nwere. hụrụ na ọ dị mkpa itinye igwe ịsa ahụ, ee ma ọ bụ ee, na-enweta nsonaazụ dị iche iche, nke mere na maka oge ọzọ, anyị ga-elebawanye anya, ma akwa na ọnọdụ ịsa ahụ.
Iji gosi na igwe igwe na ihe niile metụtara ya, enyegoro anyị ụlọ mgbe niile, ụlọ ọrụ IPSOS siri ike, mere nnyocha maka Samsung, dịka akụkụ nke mkpọsa #YaNoHayExcusas, mkpọsa nke ha chọrọ iji mee ka ndị mmadụ mata na ọ bụghị naanị ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ a, kama na ụmụ nwoke zuru oke ime ya.
Na Nọvemba 14, mkpọsa #YaNoHayExcusas bidoro na obodo Granada nke Jun, ama ama ịbụ otu n'ime teknụzụ kachasị na Spain, nke choro ime ka ndi mmadu mara banyere nha anya na nkesa oru ndi ozo. Dị ka ọmụmụ IPSOS m kwuru na paragraf gara aga, naanị 3 n'ime ụmụ nwoke 10 na-eji igwe ịsa ahụ mgbe niile. N’okpuru ebe a, anyị na - akọwapụta isi ihe kpatara ha ji ebo iji zere ọrụ a
49% amaghị ka esi etinye igwe ịsa ahụ ozugbo, ngọpụ zuru oke.
13% kwuru na ha enweghị oge.
Ọ bụ ezie na 8% na-ekwu na ha na-elekọta ọrụ ndị ọzọ na ọ na-esiri ha ike ịhazi uwe ha.
Ihe fọdụrụ na 6% kwuru na ha na-emebi uwe ha oge ọ bụla ha tinyere ha na igwe ịsa ahụ.
Dika anyi puru ihu na enweghi ihe omuma banyere udiri uwe nke aga asa, ihe mejuputara ha, ma oburu na hapuru agba ma obu ha gha eji mmiri oyi ma obu mmiri oku saa ya na otu o si aru oru, Ha gụnyere ngọpụ niile nwere ike inye ọrụ a.
IPSOS na-enye anyị data na isi ihe mere ụmụ nwanyị ji etinye igwe ịsa ahụ, ihe kpatara na anyị kọwara n'okpuru.
29% gosiputara na obu otu n'ime oru ha.
29% ọzọ na-ekwu na ha arụla ọrụ a mgbe niile "na ndabara".
Na 22% kwenyesiri ike na ha na-ahụ maka itinye ya n'ihi na ha bi naanị ha.
13% na-ekwu na ọ bụ ha na-ahụ maka itinye igwe ịsa ahụ mgbe niile n'ihi na ha ma etu esi arụ ọrụ.
Dị ka a tụrụ anya, ka afọ nke ndị nzaghachi na-eto, a na-ebelata pasent nke ndị na-etinye igwe ịsa ahụ, na 42% nke ụmụ nwoke n'etiti 18 na 34 afọ ndị na-elekọta 25%. Ọnụ ọgụgụ ndị a ekwesịghị iju anyị anya, ebe ọ bụ na ndị na-eto eto abụghị naanị na ha maara nha anya nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na ọrụ ụlọ, mana mmepe teknụzụ na-eme ụfọdụ ọrụ, dị ka itinye na igwe ịsa ahụ, dị mfe karị.
Samsung's AddWash washers enweghị ihe ọ bụla metụtara yas washers ndị na-agagharị n'ụlọ mgbe spinning malitere na na oge ụfọdụ ọ na-adị ka ịgbà ga-esi na windo pụọ. Ezubere igwe igwe a ka anyị nwee ike itinye uwe ọ bụla anyị chefuru na-enweghị ike ịmaliteghachi nhicha ahụ zuru oke, ọ na-enye anyị ohere ịtinye uwe anyị chọrọ ịmịchaa ma ọ bụ ịkpa ogho mgbe a na-asacha ọzọ, ọ na-agwa anyị nke usoro ịsa ahụ na smartphone Ọ nwere mkpọchi nke ga-egbochi ọnụ ụzọ meghee ma ọ bụrụ na ọnọdụ dị n'ime ya karịrị ogo 50, yana ikwe ka anyị kpọchie ya ka ụmụaka ghara ịmalite ya ma ọ bụ gbanwee usoro mmemme mgbe ha na-asa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ọtụtụ ụmụ nwoke na-etinye igwe ịsa ahụ, teknụzụ ọ na-enyere aka kesaa ọrụ?
Boeing chọrọ ịbụ ụlọ ọrụ izizi nke mbụ wetara ụmụ mmadụ na Mars
Nommi, mobile 4G rawụta na ọtụtụ ohere